न्यायाधीशले रुँदै फैसला सुनाएपछि वृद्धले भने– मेरो स्वर्गलाई मबाट खोसियो « Janata Samachar
प्रकाशित मिति : 18 June, 2020 10:03 am
काठमाडौं । अदालतमा एउटा यस्तो मुद्दा आयो, जसले सबैको दिमाग हल्लाइ दियो। न्यायाधीश समेत भावुक भए, मुद्दा हेरेपछि न्यायाधीशको आँखा रसायो । न्यायालयलाई मुद्ला फैसला गर्न कठिन भयो । आखिरमा के थियो ? त्यस्तो मुद्दा अदालतमा आउने पारीवारिक मुद्दा प्राय सम्पत्ति विवाद र अन्य घरायसी विषय हुन्छन् । तर त्यो मुद्दा भने बिल्कुलै फरक छ ।
एक ७० वर्षीय वृद्धले आफ्नो ८० वर्षीय दाइविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दिएका थिए । मुद्दामा यस्तो लेखिएको थियो – ‘मेरो ८० वर्षको ठूलो दाजु , अब वृद्ध हुनुभयो । त्यसैले उ आफ्नो ख्याल पनि ठिकसँगले राख्न सकेको छैन । तर मैले प्रतिबन्ध लगाउदा पनि दाइ हाम्रो ११० वर्षकी आमाको स्याहार सुसार गरिरहेका छन् । म अहिले ठिक छु त्यसैले अब मलाई आमाको सेवा गर्नको लागि मौका दिनुपर्छ । र आमालाई स्याहार सुसार गर्नको लागि मलाई जिम्मा लगाइयोस् ।’
न्यायाधीशले जब अदालती प्रक्रिया अनुसार मुद्दा हेरे । मुद्दा हेरे पछि न्यायाधीश भावुक भए । किन कि त्यो मुद्ला कानुनी भन्दा भावनात्मक थियो । त्यही कारण मुद्दा निकै चर्चाको बिषय पनि भयो। न्यायाधीशले दुइभाइलाई सम्झाउनको लागि कोशिश गरे । उनले दुर्व भाइदाई भने– कि तपाईहरु १५र१५ दिन राख्नुहोस् आमालाई ।’ तर दुवै भाइलाई यो भनाइले केही असर पारेन। त्यसपछि दाइ अर्थात् जेठो भाइले भने– कि म आफ्नो स्वर्गलाई आफूबाट टाढा किन राखु । आमाले यो भनुन् कि , आमा मसँग बस्दा कुनै समस्या छ । वा मैले आमाको स्याहार सुसार राम्रोसँग गरेको छैन भने अवश्य कान्छाभाई लाई आमाको जिम्मा लगाउनुहोस् ।’
न्यायाधीशले त्यसपछि कान्छा भाइको कुरा सुने । उनले भने– दाईले ४० वर्षदेखि आमाको सेवा एक्लै गर्दै आइरहनु भको छ । आखिर म आफ्नो कर्तव्य कहिले पूरा गरुँ ?’ दुवै भाइको कुरा सुनेपछि न्यायाधीशले उनीहरुलाई फेरि सम्झाउने कोशिस गरे । न्यायाधीशले उनीहरुलाई आमालाई मिलेर आधा आधा समय गरी पाल्न सुझमव दिए । तर उनीहरुको आ आफ्नै अडान रह्यो । दुवै भाइ आ ाफ्नै अडानमका रहे पछि कस्ताृ पक्षमा फैला गर्ने न्यायाधीशलाई समस्या पर्यो । न्यायाधीशले त्यसपछि आमालाई अदालतमा उपस्थित गराएर राय बुझ्न । ३० किलो जति वजनकी उनीहरुको आमा धेरै नै कमजोर अवस्थाकी थिइन् । कान्छो छोराले दाजुको घरबाट बोकेर अदालतसम्म ल्याए थिए । न्यायाधीशले आमासँग सोधे– तपाई दुई भाइ मध्ये कोसँग बस्न चाहनु हुन्छ ?
आमाले दुख मान्दै भनिन्– ‘मेरो लागि दुवै छोरा बराबर छन म कुनै एउटाको पक्षमा फैसला सुनाएर अर्को छोराको मन दुखाउन चाहन्न । तपाईं न्यायाधीश हुनुहुन्छ , निर्णय गर्ने तपाईंको काम हो । जे तपाईं निर्णय गर्नुहुन्छ त्यही नै मान्य हुनेछ ।’ आमाको त्यस्तो भनाईले न्यायाधीश झन भावुक भए । न्याधीशल गरुँगो मन बनाएर निर्णय सुनाए– यो न्यायालय कान्छो भाइको भावनामा सहमत छ कि जेठो दाजु साचै नै बूढो र कमजोर हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा आमाको स्याहार सुसार गर्ने जिम्मा कान्छोभाइलाई दिने निर्णय गरियो ।
अदालतको फैसलापछि जेठोले रुँदै चिच्याए – यस वद्धअवश्थामा मेरो स्वर्गलाई मबाट खोसियो।’ त्यसपछि अदालतमा न्यायाधीशसहित सबै जनामा रुवाबासी चल्यो । (सन्तोष कार्कीको फेसबुकबाट लिएर सम्पादित शब्द)